China pabrik Cover pabrika sy mpanamboatra | ShiningPlast
Ny Tarigetran'ny Toby Tarpaulin-Taribon-tsoroka ny Taribon-tsoratry ny Tanan-tsoratry ny Tanan-dehibe izay vita amin'ny rindrina vita amin'ny polyethylene avo be, paingotra avo roa heny ary paola aluminium ho an'ny tanjaka sy ny tanjaka tsara kokoa.
Ny Tarigetran'ny Toby Tarpaulin-Taribon-tsoroka ny Taribon-tsoratry ny Tanan-tsoratry ny Tanan-dehibe izay vita amin'ny rindrina vita amin'ny polyethylene avo be, paingotra avo roa heny ary paola aluminium ho an'ny tanjaka sy ny tanjaka tsara kokoa. Mampiseho porofo amin'ny vanin-taona rehetra, ny harafesina, ny hatsiaka, ny ranomaso ary ny fanoherana UV mba ho matanjaka sy azo ampiasaina amin'ny fanasana tsotra. Mety amin'ny fampiasana amin'ny ampinga isan-karazany sy famatotra ho an'ny milina, sambo, fiara, tobin-tany, fanentanana ary fananganana.
Eyelet Ny felam-bolo vita amin'ny aluminiana vita amin'ny rano dia mirefy eo amin'ny 3 tongotra.
· Matanjaka sy maharitra: Matanjaka ary maharitra ny PE voany. Seams fitsaboana tsara sy voaisy tombo-kase ho an'ny fahatelahana fanampiny.
· Titafandoha: mateza mahery vaika matevina dia manamaivana ny fahatapahana mandritra ny fitaterana sy ny fitahirizana. Ny tady poline kambana dia nohamafisina dia manome tanjaka hafahafa sy fanoherana ny ranomaso.
· Tantohana rano sy ny toetrandro rehetra: miaro ny areti-mifindra na fahasimban'ny orana na ny hamandoana.
· UV-Resistant: Nampiasa ny fitsaboana sy fanamainana UV tsara indrindra izahay mba hiantohana ny fametrahana mandritra ny fiparitahan'ny UV maharitra. Ny fitaovana HDPE dia vita amin'ny rano ary tsy manohitra ny UV
Previous: Cover Cover
Manaraka: Debris Netting